Umtshana KaPawulos Wayengoyiki | Fundisa Abantwana Bakho
Masifunde ngomfana owasindisa umalume wakhe. Loo malume yayingumpostile uPawulos. Asilazi lona igama lalo mfana, kodwa siyazi ukuba wenza into eyayibonisa ukuba wayengoyiki. Uyafuna ukwazi ukuba wenzani?—
UPawulos wayevalelwe ejele eYerusalem. Wabanjwa kuba eshumayela ngoYesu. Amanye amadoda akhohlakeleyo ayemcaphukela uPawulos, ngoko enza iqhinga elibi. Athi: ‘Masicele umphathi womkhosi axelele amajoni akhe ukuba ase uPawulos kwinkundla yamatyala. Siza kuzimela ngasendleleni ukuze xa edlula simbulale!’
Umtshana kaPawulos waxelela uPawulos nomphathi-mkhosi ngeqhinga elenziwayo
Umtshana wakhe weva ngeli qhinga. Wayeza kwenza ntoni? Waya ejele waza waxelela uPawulos into eza kwenziwa ngala madoda. UPawulos wathi makaye kuxelela umphathi-mkhosi. Ucinga ukuba kwakulula kulo mtshana kaPawulos ukuya kuthetha nomphathi?— Kwakunzima, kuba umphathi wayengumntu ohloniphekileyo. Kodwa umtshana kaPawulos akazange oyike ukuya kuthetha naye.
Loo mphathi wayazi into amakayenze. Waqokelela umkhosi wamajoni amalunga nayi-500 ukuze ukhusele uPawulos! Wawuxelela ukuba uhambe noPawulos umse eKesareya kwangobo busuku. Ngaba uPawulos wasinda?— Ewe, amadoda akhohlakeleyo akazange akwazi ukumbulala! Iqhinga lawo alizange lisebenze.
Ufunda ntoni kweli bali?— Nawe unokukwazi ukungoyiki njengomtshana kaPawulos. Kufuneka singoyiki xa sithetha nabanye ngoYehova. Ngaba uza kuba nesibindi uze uqhubeke uthetha ngoYehova?— Ukuba unjalo, unokusindisa omnye umntu.
Amadoda akhohlakeleyo ayefuna ukumenza ntoni uPawulos?
Wenza ntoni umtshana kaPawulos? Kutheni loo nto yayibonisa ukuba unesibindi?
Wena unokuba nesibindi njani njengomtshana kaPawulos?